रित्तिदै मोफसलका सिनेमा घरः विद्युतको पैसा पनि उठ्दैन् हलबाट • Gazzabko Online
Prem Pun || March 5, 2018 at 1:39 pm
कुनै समय सबै जसो नेपाली चलचित्रहरुले बम्पर कलेक्शन गर्दथे । प्रदर्शनमा आएका फिल्महरुले काठमाडौँ भन्दा मोफसलबाट धेरै पैसा कमाउथे । तर हिजोआज मोफसलमा फिल्म चल्दैनन् । मोफसल भन्दा काठमाडौँ उपत्यकाका हलबाट धेरै कलेक्शन हुन्छ । निर्माताहरु काठमाडौँका फिल्म हलमा निर्भर रहनु परेकोृ छ ।
१० वर्ष अघि मात्रै मोफसलमा फिल्महरुले राम्रो कमाउथे । हलमा मान्छे भरिभराउ हुन्थे । तर अब त्यो समय रहेन् । मोफसलका हलहरु खाली छन् । त्यसैको एउटा प्रतिनिधी उदाहरण दाङ जिल्ला पनि हो । दाङको घोराही, नारायणपुर, तुलसीपुर लगायतका शहरमा आधा दर्जन हल छन् । तर दर्शक नजाँदा हलका कर्मचारीको जाडोमा घाम ताप्ने र गर्मीमा पंखाको हावा खानु भन्दा अर्को काम छैन् ।
दाङको तुलसिपुरमा दुई ओटा सिनेमा घर छन् । तर ती दुई ओटै सिनेमा घर सधैँ जसो खाली हुन्छन् । तुलसिपुरस्थित विष्णु हलका संचालक रमेश कुमार पोख्रेल भन्छन्– ‘फिल्म चलायो तर लगानी नै उठ्दैन् । दैनिक ८ सय उठ्यो भने पनि हामीले फिल्म चलाउने गरेका छौँ । घाटा छ । तर के गर्नु आएका दर्शक फर्काउने कुरा पनि भएन् ।’
तुलसिपुर स्थित ओम शान्ति सिनेमा घर । तस्विरः राजेश खत्रीतुलसिपुरमै अवस्थित ओम शान्ति फिल्म हल पनि अर्को ठुलो सिनेमा घर हो । यो हलको हालत पनि त्यस्तै छ । हलका संचालक कृष्ण प्रसाद अधिकारी राम्रो फिल्म प्रदर्शनमा आउँदा पनि हल खाली हुने गरेको बताउँछन् । हलमा दर्शकहरु किन आउँदैनन् भन्ने प्रश्नमा भन्छन्– ‘दर्शहरुले खोजे अनुशारको हल छैन् । सेवा सुविधा छैन् । निर्माताहरु पनि गुणस्तरिय फिल्म बनाउँदैनन् । त्यसैले हलमा दर्शक आउँदैनन् ।’
तुलसिपुर स्थित विष्णु सिनेमा घर। तस्विरः राजेश खत्री
घाटा खाएर पनि फिल्म चलाउँदै आएका हलवालाहरु दर्शक नआउँदा कतिपय अवस्थामा हल नै बन्द गर्नु परेको अवस्था पनि छ । कहिलेकाँही विद्युतको पैसा पनि नउठ्ने भएकोले धेरै पटक दर्शकहरुलाई फर्काएको अनुभव पनि सुनाउँछन् हलवालाहरु । तर दर्शकहरुलाई कति दिन फर्काउने ? त्यसैले घाटामा पनि फिल्म चलाउनु हलवालाको बाध्यता बनेको छ ।
यीनै हलमा कुनै समय फिल्महरुले ५२ औँ र १ सय औँ दिन मनाउएको इतिहास पनि छ। राजेश हमाल, भुवन केसी, निखिल उप्रेती, विपना थापा, झरना थापा, दीलिप रायमाझी, रेखा थापा जस्ता कलाकारहरु दर्शक भेट्न यी हलहरुमा पुग्ने गरेको कुरा अब एकादेशको कहानी भैसकेको छ । के कारणले मोफसलका हलमा दर्शक घटे ? यो बहसको विषय बनेको छ ।
केहि प्रतिनिधी उदाहरणको रुपमा मात्रै दाङका हलहरुलाई हेर्न सकिन्छ । सल्यान, बाँके, बर्दीया, रोल्पा, गुल्मी, कपिलवस्तु लगायत धेरै ठाउँका हलहरुको हालत दाङको जस्तै छ । कुनै समय दैनिक ४ ओटासम्म शो चल्दा पनि हाउसफुल रहने हलहरुमा हिजोआज १ शो नचल्नु गम्भिर विषय हो । नेपाली फिल्मको विकास हुँदैछ भन्ने कुरा सन्दै गर्दा मोफसलका हलहरुको यो दयनिय अवस्थालाई के भन्ने ? यहि अवस्था रह्यो भने निकट भविष्यमा मोफसलका अधिकांश हलहरु सदाको लागि बन्द हुने निश्चित छ । त्यसैले यो विषयमा सम्बन्धित सरोकारवालाको ध्यान पुग्न आवश्यक छ ।
तस्विरः राजेश खत्री ।